Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.2.1 Galaxy Zoo
Zoo Zoo jikọtara mgbalị nke ọtụtụ ndị ọrụ afọ ofufo na-enweghị ọkachamara iji kpoo ụyọkọ kpakpando.
Zoo Zoo si na nsogbu nke Kevin Schawinski, nwa akwụkwọ na-agụsị akwụkwọ na Astronomy na Mahadum Oxford na 2007. Na-eme ka ọ dị ntakịrị, Schawinski nwere mmasị na ụyọkọ kpakpando, na ụyọkọ ụyọkọ kpakpando-elliptical ma ọ bụ gburugburu-na - site na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ọbara ọbara. N'oge ahụ, amamihe dị n'etiti ndị na-enyocha mbara igwe bụ ụyọkọ ụyọkọ kpakpando ndị dị otú a, dịka anyị Milky Way, na-acha anụnụ anụnụ (na-egosi ntorobịa) na ụyọkọ ụyọkọ kpakpando elliptical na-acha uhie uhie (na-egosi afọ ndụ). Schawinski nwere obi abụọ banyere amamihe a. Ọ na-enyo enyo na ọ bụ ezie na ụkpụrụ a nwere ike ịbụ eziokwu n'ozuzu, ọ nwere ike ịbụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọzọ, na site n'inyocha nza nke ụyọkọ ụyọkọ kpakpando ndị a na-adịghị ahụkebe-ndị na-adabaraghị ọnọdụ a tụrụ anya ya-ọ nwere ike ịmụta ihe banyere usoro ahụ ụyọkọ kpakpando.
Ya mere, ihe Schawinski chọrọ iji kpochapụ amamihe dị iche iche bụ nnukwu ụyọkọ nke ụyọkọ ụyọkọ kpakpando dị iche iche; ya bụ, ụyọkọ kpakpando ndị e wepụtara dịka ma ọ bụ ma ọ bụ elliptical. Otú ọ dị, nsogbu ahụ bụ na ụzọ usoro algorithm dị ugbu a maka nhazi ahụ kachabeghị mma iji mee nchọpụta sayensị; na okwu ndị ọzọ, ikpo ụyọkọ kpakpando bụ, n'oge ahụ, nsogbu nke siri ike maka kọmputa. Ya mere, ihe a chọrọ bụ a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụmụ mmadụ -classified ụyọkọ kpakpando. Schawinski weghaara nsogbu nhazi a na ịnụ ọkụ n'obi nke nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ. N'ọnọdụ nke marathon nke ụbọchị iri abụọ na anọ, o nwere ike ịmepụta ụyọkọ kpakpando 50,000. Ọ bụ ezie na ụyọkọ ụyọkọ kpakpando 50 nwere ike iyi ụda, ọ bụ nanị ihe dịka pasent 5 nke ihe dịka otu nde ụyọkọ kpakpando nke e webatara na Sloan Digital Sky Survey. Schawinski ghọtara na ọ dị mkpa ka o nwekwuo ohere.
Ọ dabara nke ọma, ọ na-enyo na ọrụ nke edida ụyọkọ kpakpando na ọ dịghị achọ elu ọzụzụ na mbara igwe; i nwere ike ịkụziri onye na-eme ya mara mma ngwa ngwa. Ndị ọzọ okwu, ọ bụ ezie na edida ụyọkọ kpakpando bụ a ọrụ na-esikwara kọmputa, ọ bụ ezigbo mfe maka ụmụ mmadụ. Ya mere, mgbe ọ nọ ọdụ a ụlọ mmanya na Oxford, Schawinski na ibe-enyocha mbara igwe Chris Lintott rọrọ elu a website ebe ọrụ afọ ofufo ahụ ga-ewere oyiyi nke ụyọkọ kpakpando. Ọnwa ole na ole mgbe e mesịrị, Galaxy Zoo A mụrụ.
Na weebụsaịtị Zoo Web, ndị ọrụ afọ ofufo ga-ewe minit ole na ole ọzụzụ; dịka ọmụmaatụ, na-amụta ọdịiche dị n'etiti ụyọkọ kpakpando na mbara igwe (nọmba 5.2). Mgbe ọzụzụ a gasịrị, onye ọrụ afọ ofufo ga-agafe ajụjụ dị mfe - n'ụzọ ziri ezi ịkọ 11 ụyọkọ kpakpando iri na atọ na nhazi ọkwa - wee malite ịhazi ụyọkọ ụyọkọ kpakpando ndị a na-amaghị site na ntanetị weebụ dị mfe (nọmba 5.3). Mgbanwe site na onye ọrụ afọ ofufo maka onye na-enyocha mbara igwe ga-ewere ọnọdụ na ihe na-erughị minit iri 10 ma ọ bụ naanị chọrọ ka ị na-agafe obere ihe mgbochi, nza ajụjụ dị mfe.
Onyonyo 5.2: Ihe atụ nke ụyọkọ ụyọkọ kpakpando abụọ: gburugburu na elliptical. Ụlọ ọrụ Zoo na-eji ihe karịrị 100,000 ndị ọrụ afọ ofufo emepụta ihe karịrị 900,000 foto. Edeghachiri site na ikikere site na http://www.GalaxyZoo.org na Sloan Digital Sky Survey .
Onu ogugu 5.3: Ntinye ntinye ebe ndi choro ka ha weputa ihe oyiyi. Edeghachiri ya site na ikike site na Chris Lintott dabeere na ihe oyiyi site na Sloan Digital Sky Survey .
Zoo Zoo chetara ndị ọrụ afọ ofufo mbụ mgbe e gosipụtara ọrụ ahụ n'akwụkwọ akụkọ, na ihe dị ka ọnwa isii, ọrụ ahụ toro na-agụnye ihe karịrị 100,000 ndị ọkà mmụta sayensị nke ụmụ amaala, ndị mmadụ na-ekere òkè n'ihi na ha nwere mmasị na ọrụ ahụ ma chọọ inyere aka na mbara igwe. Otu a, ndị ọrụ afọ ofufo a dị 100,000 nyere ngụkọta nke nchịkọta ihe karịrị nde 40, tinyere ọtụtụ n'ime ọkwa ndị sitere na obere, ndị isi nke ndị na-eso (Lintott et al. 2008) .
Ndị na-eme nchọpụta ndị nwere ahụmahụ na-anata ndị na-enyere ndị na-enyere ndị na-azụghị akwụkwọ akara aka nwere ike ịmalite inwe obi abụọ banyere àgwà data. Ọ bụ ezie na nkwenkwe a bụ ihe ezi uche dị na ya, Zoogos Zụlị gosiri na mgbe a na-ehichapụ onyinye onyinye afọ ofufo, nyocha, na nchịkọta, ha nwere ike ịpụta nsonaazụ dị elu (Lintott et al. 2008) . Otu ihe dị mkpa maka ịme ka ìgwè mmadụ ahụ mepụta data ndị ọkachamara na-arụ ọrụ , ya bụ, inwe otu ọrụ ahụ ọtụtụ ndị dị iche iche rụrụ. Na Zoo Zoo, e nwere ihe dịka ọkwa 40 site na ụyọkọ kpakpando; ndị na-eme nchọpụta na-eji ndị na-enyere ndị na-enyere ndị na-azụghị akwụkwọ akara aka agaghị enwe ego ọ bụla a na-enye aka na ya. Ihe ndị ọrụ afọ ofufo ahụ enweghị ọzụzụ, ha mere ka ha nwee oke ọrụ.
Ọbụna na nchịkọta ọtụtụ site na ụyọkọ kpakpando, Otú ọ dị, ijikọta setịpụrụ nke nhazi ọkwa afọ ofufo iji mepụta nkwekọrịta nkwekọrịta bụ aghụghọ. Ebe ọ bụ na nsogbu ndị yiri nke a na-esite n'ọtụtụ ọrụ nhazi mmadụ, ọ bara uru iji nyochaa mkpirikpi atọ nke ndị nyocha nke Zoo na-emepụta nhazi ọkwa ha. Nke mbụ, ndị nyocha ahụ "kpochara" data ahụ site na iwepụta nchịkọta ntụrụndụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ na-akọwapụta otu ụyọkọ kpakpando ọzọ-ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ha na-agbalị ịmepụta ihe ọ rụpụtara-ọ bụrụ na a tụfuo ọkwa ha niile. Nke a na nhicha ndị ọzọ dị otú ahụ wepụrụ ihe dịka 4% nke ọkwa niile.
Nke abụọ, mgbe nhichachara, ndị na-eme nchọpụta chọrọ iwepụ ihe ndị na-adịghị mma n'usoro nhazi. Site na nyocha ihe omimi nke ntinye n'ime oru mbu - dika ima atu, ndi choputara ndi mmadu ndi ozo n'igwe na monochrome karia agba-ndi oru nyocha achoputa otutu ihe ndi na-acho ihe omuma, di ka ihe ndi na-achikota uzo di iche iche dika ohia (Bamford et al. 2009) . Ịgbanwe maka nlezianya ndị a dị oké mkpa dị mkpa n'ihi na redundancy adịghị ewepu iwepụghị usoro; ọ na-enyere aka wepu njehie na-enweghị isi.
N'ikpeazụ, mgbe arụmụka gasịrị, ndị nchọpụta chọrọ ụzọ ha ga - esi jikọta ọkwa nke onye ọ bụla iji mepụta nhazi ọkwa. Ụzọ kachasị mfe iji jikọta nchịkọta maka galaxy ọ bụla ga-abụrịrị ịhọrọ nhazi ọkwa kachasị mma. Otú ọ dị, ọbịbịa a ga-enye onye ọ bụla ọrụ afọ ofufo, ndị na-eme nchọpụta weere na ụfọdụ ndị ọrụ afọ ofufo dị mma karịa nhazi ọkwa karịa ndị ọzọ. Ya mere, ndị nchọpụta ahụ mepụtara usoro ịkọ arọ dị mgbagwoju anya nke gbalịrị ịchọpụta ndị kachasị mma na inye ha ibu arọ.
Ya mere, mgbe usoro nhazi nke atọ-nhicha, mkpesa, na ibu arọ-òtù ndị na-eme nnyocha na Zoo zụlitere nhazi ọkwa afọ ofufo 40 dịka otu nchịkọta nke nchịkọta ndị mmadụ. Mgbe e jiri ọnụ ọgụgụ ndị a dị na Zoo tụnyere nyocha atọ nke ndị ọkachamara na-enyocha mbara igwe, gụnyere nhazi nke Schawinski nke nyere aka kpalie Galaxy Zoo, enwere nkwekọrịta siri ike. N'ihi ya, ndị ọrụ afọ ofufo ahụ, dịka nchịkọta, nwere ike inye ọkwa dị elu na ọnụ ọgụgụ ndị na-eme nchọpụta enweghị ike ịlụ (Lintott et al. 2008) . N'ezie, site na ịhazi ọkwa ụmụ mmadụ maka ụyọkọ ụyọkọ ụyọkọ kpakpando dị ukwuu, Schawinski, Lintott, na ndị ọzọ nwere ike igosi na ọ bụ nanị pasent 80 nke ụyọkọ kpakpando na-agbaso usoro a tụrụ anya-acha anụnụ anụnụ na ellipticals na-acha uhie uhie-na ọtụtụ akwụkwọ edere banyere nchọpụta a (Fortson et al. 2011) .
N'iburu nzụlite a, ị nwere ike ịhụ ugbu a otú Galaxy Zoo si gbasoro uzommebe nke otu, nke otu ụzọ nhazi nke a na-eji mee ihe maka ọtụtụ ọrụ nhazi mmadụ. Nke mbụ, a na- agbagha nnukwu nsogbu dị iche iche . N'okwu a, nsogbu nke ịkọ ụyọkọ ụyọkọ kpakpando dị iche iche kewara n'ime otu nde nsogbu nke ịmepụta ụyọkọ kpakpando. Ọzọ, ịwa na-etinyere na onye ọ bụla mmaji onwe ha. N'okwu a, ndị ọrụ afọ ofufo wepụtara ụyọkọ kpakpando ọ bụla dị ka agbada ma ọ bụ elliptical. N'ikpeazụ, a jikọtara ihe ọ bụla iji mepụta otu nkwekọrịta. N'okwu a, usoro ngwakọta gụnyere nhicha, mkparịta ụka, na ịdị arọ iji mepụta nhazi ọkwa maka ụyọkọ kpakpando ọ bụla. Ọ bụ ezie na ihe ka ọtụtụ n'ụlọnga na-eji uzommebe zuru oke a, ọ bụla a ghaghị ịhazi ihe ọ bụla a na-agwa. Dịka ọmụmaatụ, na atụmatụ nhazi mmadụ na-akọwa n'okpuru, a ga-agbaso usoro nhazi ahụ, mana itinye ma jikọta nzọụkwụ ga-adị nnọọ iche.
Maka òtù Zoo Mobi, ọrụ mbụ a bụ nanị mmalite. Ngwa ngwa, ha ghọtara na ọ bụ ezie na ha nwere ike ikpo nso igwe ụyọkọ kpakpando, otu ọnụ ọgụgụ a ezughị iji rụọ ọrụ nyocha igwe ntanetị ọhụrụ, nke nwere ike ịpụta ihe oyiyi nke ụyọkọ kpakpando 10 (Kuminski et al. 2014) . Iji mee ka mmụba site na 1 nde ruo ijeri 10-ihe dị mkpa nke 10,000-Galaxy Zoo ga-achọ inweta ihe dị ka ugboro 10,000 ọzọ. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ afọ ofufo na Intanet dị ukwuu, ọ bụghị njedebe. Ya mere, ndị nchọpụta ahụ ghọtara na ọ bụrụ na ha ga-ejikwa data na-arịwanye elu na-arịwanye elu, ọ dị mkpa ka e nwee ihe ọhụrụ, ọbụna karị.
Ya mere, Manda Banerji na Schawinski, Lintott, na ndị ọzọ so n'òtù Zoo team nke Galaxy (2010) -azụkụkụ nkuzi iji kọwaa ụyọkọ kpakpando. N'ikwu ya kpọmkwem, iji klas ndị mmadụ na-emepụta site na Galaxy Zoo, Banerji wuru igwe na-amụta ihe nlereanya nwere ike ịkọ ọdịdị mmadụ nke ụyọkọ kpakpando dabere na àgwà nke onyinyo ahụ. Ọ bụrụ na ihe atụ a nwere ike ịmepụta nchịkọta ụmụ mmadụ na oke ziri ezi, mgbe ahụ, ndị na-eme nchọpụta nke Galaxy Zoo nwere ike iji ya kọwaa ụyọkọ ụyọkọ ụyọkọ kpakpando.
Isi nke Banerji na ndị ọrụ ibe gị dị nnọọ ka usoro ndị a na-ejikarị eme nnyocha na mmadụ, ọ bụ ezie na nhọta ahụ nwere ike ọ gaghị edo anya na elele anya mbụ. Akpa, Banerji na ibe tọghatara ọ bụla image n'ime a set nke space atụmatụ na achịkọtara ya Njirimara. Dịka ọmụmaatụ, maka ihe oyiyi nke ụyọkọ kpakpando, enwere ike inwe njirimara atọ: ọnụego anụnụ anụnụ na onyinyo ahụ, ọdịiche dị na nchapụta nke pikselụ, na oke nke pixels na-adịghị ọcha. Nhọrọ nke atụmatụ ziri ezi bụ akụkụ dị mkpa nke nsogbu ahụ, ọ na-achọkarị nchịkwa isiokwu. Nzọụkwụ mbụ a, nke a na - akpọ njinarị nke njirimara , na - emepụta matrik data dịka otu nkwụsị nke oyiyi na mgbe atọ dị na kọwaa onyinyo ahụ. Nyere matrik data na mmepụta achọrọ (dịka, ma ọ bụ mmadụ dị iche iche dị ka ụyọkọ kpakpando elliptical), onye nchọpụta ahụ na-emepụta ihe omimi ma ọ bụ ngwa ngwa ịmụ ihe-dịka ọmụmaatụ, mkparịta ụka na-egosi-nke na-ebu ọkwa nhazi ụmụ mmadụ dabere na atụmatụ nke ihe oyiyi ahụ. N'ikpeazụ, onye na-eme nchọpụta na-eji njigide ndị a na-emepụta ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ nke ụyọkọ kpakpando ọhụrụ (nọmba 5.4). Na ngwa igwe, usoro a-iji ihe atụ edere aha iji mepụta ihe atumatu nke nwere ike igosi ihe omuma ohuru-a na-akpọ nkuzi nlekọta .
Ihe odide nke 5.4: Nkọwa dị mfe maka otú Banerji et al. (2010) ji Galaxy Zoo kọwaa iji zụọ igwe na-amụta ihe nlereanya iji mee nhazi ụyọkọ kpakpando. Foto nke ụyọkọ kpakpando ka a gbanwere na matrix nke atụmatụ. Na ihe atụ a dị mfe, enwere njirimara atọ (ọnụọgụ anụnụ anụnụ na onyinyo ahụ, ọdịiche dị na nchapụta nke pikselụ, na oke nke pixels nonwhite). Mgbe ahụ, maka mpaghara nke ihe oyiyi ahụ, a na-eji mkpado Zoo na-eji ígwè ọrụ amụ ihe. N'ikpeazụ, a na-eji ihe igwe na-amụ ihe iji chọpụta nhazi maka ụyọkọ kpakpando fọdụrụnụ. M na-akpọ nke a na-enyere ndị mmadụ aka nyocha ọrụ maka kọmputa, n'ihi na, kama inwe ụmụ mmadụ ka ha dozie nsogbu, ọ bụ ụmụ mmadụ na-emepụta dataset nke a pụrụ iji zụọ kọmputa iji dozie nsogbu ahụ. Uru nke usoro nhazi nke mmadụ a na-enyere aka na kọmputa na-enyere gị aka ijikwa data njedebe na-enweghị ngwụcha site n'iji naanị ego zuru oke nke mgbalị mmadụ. Foto nke ụyọkọ kpakpando ka a na-eji ikike site na Sloan Digital Sky Survey .
Ihe ndị dị na Banerji na ndị ọrụ ibe m na-amụta ihe nlereanya dị mgbagwoju anya karịa ndị na-eme ihe ngosi egwuregwu m - dịka ọmụmaatụ, ọ na-eji ihe ndị dị ka "de Vaucouleurs kwesịrị ekwesị" - na ihe nlereanya ya abụghị ihe nchịkwa nke logistic, ọ bụ netwọk na-emepụta ihe. N'iji njirimara ya, ihe nlereanya ya, na nhazi ọkwa Zoo Zoo na Zoo, ọ na-enwe ike ịmepụta igwe na njirimara ọ bụla, wee jiri ọkwa ndị a mee amụma banyere nhazi ọkwa ụyọkọ kpakpando. Dịka ọmụmaatụ, nyocha ya chọpụtara na ihe oyiyi ndị dị ala "de Vaucouleurs kwesịrị ekwesị" dịka o yikarịrị ka ha ga-enwe ụyọkọ ụyọkọ kpakpando. N'iji igwe ndị a mee ihe, o nwere ike ịkọ ọdịdị mmadụ nke ụyọkọ kpakpando na ezi uche ziri ezi.
Ọrụ nke Banerji na ndị ọrụ ibe tụgharịrị Zoo Zoo n'ime ihe m ga-akpọ usoro kọmputa nyochaa mmadụ . Ụzọ kacha mma ị ga-esi chee echiche banyere usoro ndị a bụ na kama ịme ụmụ mmadụ ka ha dozie nsogbu, ha nwere ụmụ mmadụ na-ewu dataset nke a pụrụ iji zụọ kọmputa iji dozie nsogbu ahụ. Mgbe ụfọdụ, ịzụ kọmputa iji dozie nsogbu ahụ nwere ike ịchọrọ ọtụtụ ihe atụ, naanị otu ụzọ ị ga-esi nweta ọtụtụ egosiputa dị iche iche bụ imekọ ihe ọnụ. Uru nke enyemaka a na-enweta na kọmputa bụ na ọ na-enyere gị aka ịmepụta data zuru oke nke njedebe site n'iji naanị ego zuru oke nke mgbalị mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, onye na-eme nchọpụta nwere nde ụyọkọ kpakpando dị iche iche nwere ike ịmepụta ihe atụ nke a pụrụ iji mee ihe n'otu narị ijeri ma ọ bụ ọbụna ụyọkọ ụyọkọ kpakpando. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụyọkọ kpakpando, mgbe ahụ, ụdị ụdị mmadụ a bụ kọmputa bụ nanị ngwọta ọ ga-ekwe omume. Nke a enweghi njedebe na-enweghị ngwụcha ọ bụ n'efu, Otú ọ dị. Ịmepụta ihe omuma nke mụta ihe nke nwere ike ịmalite ịmalite ịhazi ụmụ mmadụ bụ nsogbu siri ike, ma ọ bụ ihe dị mma na e nwewo akwụkwọ ndị magburu onwe ha a raara nye isiokwu a (Hastie, Tibshirani, and Friedman 2009; Murphy 2012; James et al. 2013) .
Zoo Zoo bụ Zọlọn Zoo bụ ihe atụ zuru oke nke ọtụtụ atụmatụ nhazi mmadụ. Nke mbụ, onye nchọpụta na-anwale ọrụ ahụ n'onwe ya ma ọ bụ site na obere ìgwè nke ndị na-enyere aka nyocha (dịka, mgbalị mbụ nke nhazi ọkwa Schawinski). Ọ bụrụ na ụzọ a adịghị adaba nke ọma, onye nyocha ahụ nwere ike ịkwaga na ọrụ nhazi mmadụ na ọtụtụ ndị na-eso ya. Ma, maka ụfọdụ akwụkwọ data, mgbalị ụmụ mmadụ dị ọcha agaghị ezu. N'oge ahụ, ndị na-eme nchọpụta kwesịrị ịmepụta usoro nhazi nke mmadụ na-enyere aka na kọmputa iji jiri usoro mpempe akwụkwọ igwe na-azụ ihe ndị mmadụ nwere ike iji mee ihe na njedebe nke data.